I-Decoora iwebhusayithi ye-Actualidad Blog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ku- umhlaba wokuhlobisa, futhi kuyo siphakamisa imibono yoqobo yekhaya lakho, ingadi, ihhovisi ... ngenkathi sikhuluma ngamathrendi nentuthuko kulo mkhakha.
El Ithimba lokuhlela le-Decoora Yenziwe ngabalandeli bezwe lomhlobiso abajabule ukwabelana ngolwazi lwabo nekhono labo. Uma ufuna futhi ukuba yingxenye yawo, unganqikazi sibhale ngaleli fomu.
Yize ngiziqondisile izifundo zami emkhakheni wezimboni nobunjiniyela, kunezinye izinto eziningi ezingigcwalisayo njengomculo, ukwakheka kwangaphakathi noma ukupheka. I-Decoora inginika ithuba lokwabelana ngamathiphu, imibono kanye ne-DIYS mayelana nokuhlobisa nani nonke.
Njengoba ngangimncane ngangibuka umhlobiso wanoma iyiphi indlu. Kancane kancane, umhlaba wezakhiwo zangaphakathi uqhubekile nokungithakazelisa. Ngiyathanda ukuveza ubuhlakani bami nokuhleleka kwengqondo ukuze ikhaya lami lihlale liphelele ... futhi ngisize abanye ukuthi bakufinyelele!
Ngangihlale ngicace bha ukuthi into yami kwakuwukuba nguthisha. Ngakho-ke, ngineziqu ze-English Philology. Kepha ngaphezu kobizo lwami, okunye engikuthandayo ngumhlaba wokuhlobisa, ukuhleleka nobuciko bokuhlobisa. Lapho ubuciko kufanele buhlale bukhona njalo futhi lokho kuyinselelo engiyithandayo.
Ngeziqu ku-Advertising, engikuthanda kakhulu ukubhala. Ngaphezu kwalokho, ngikhangwa yikho konke okuthokozisayo nobuhle, yingakho ngingumlandeli wokuhlobisa. Ngithanda izinto zakudala nezaseNordic, izitayela zokuvuna nezimboni phakathi kwabanye. Ngifuna ugqozi futhi nginikeze imibono yokuhlobisa.
Njengamanje ngiyi-ejenti futhi ngingenisa ifenisha esezingeni eliphakeme, ikakhulukazi eyaseNordic, ngemuva kweminyaka engu-10 yesipiliyoni emkhakheni wezokuThengisa, okokuqala njengomphathi wesitolo kumakamelo amaningi okukhombisa nokuhlobisa eMadrid, futhi kamuva njengomklami wangaphakathi nokucacisa ku isitudiyo sezakhiwo. Bengihlala ngikhomba ngama-idiosyncrasies wedizayini yaseScandinavia: Okubalulekile, okusebenzayo, okungaphelelwa yisikhathi, okumibalabala nokungenabo ubuciko.
Ngithweswe iziqu kwi-Hispanic Philology, ngithanda izincwadi nazo zonke izinto ezinhle ngobuhle. Umdlalo wami engiwuthandayo: ukutshela umhlaba imibono yami ngakho konke okuphathelene nezwe lokuhlobisa kwangaphakathi nezinto zokuklama. Ngiyethemba ukujabulela okuqukethwe kwami.